အဆီကပေးသော ကလေးကျန်းမာရေး – Burmese Baby
🌺ဆရာတို့က အဆီအဆိမ့် မစားနဲ့ပြောတယ်။ ပြီးတော့ အဆီက လူအတွက်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ်လည်းပြောတယ်။ ဘာကိုယုံရမလဲ ဆရာ။ ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုးတော့ မလုပ်နဲ့လေ ဆရာ။
🌺ကျွန်မကလေး အသက် ၁နှစ်ပြည့်ပြီ။ ဆရာဝန်က ဖော်မြူလာတိုက်တာ ရပ်ခိုင်းပြီး နွားနို့စတိုက်တော့လို့ပြောတယ်။ အဆီအပြည့်ပါတဲ့ full cream milk (whole milk)တိုက်ရမလား। အဆီလျော့အောင်လုပ်ထားတဲ့ light milk (low fat milk)တိုက်ရမလား။ အဆီထုတ်ထားတဲ့ skim milk(nonfat milk ) တိုက်ရမလား။ သမီးအဖေကိုတော့ သူ့ဆရာဝန်က skim milk သောက်လို့ပြောတယ်။ skim milk တိုက်လိုက်ရင် calcium နည်းသွားမလား မသိဘူး။
🌺ကျွန်တော့တို့အိမ်မှာ စားအုန်းဆီမသုံးဘူး။ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူးလေ။ ပဲဆီ। နေကြာဆီ ပဲသုံးတယ်။ မိန်းမရေ မနေ့က ကြက်ကြော်ထားတဲ့ ပဲဆီလေး ပြန်သုံးပြီး အာလူးလေး ကြော်ပေးပါဦး။
အဲဒီစကားလေးတွေကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာကို အောက်ပါအဆီ မှတ်စုလေးအရင်ဖတ်ပါ။ပြီးလျှင် သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။
အဆီဓာတ်သည် ကျန်းမာရေး। အာဟာရအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ?
➡️လူသား၏ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံးသည် ဆဲလ်ဆိုသော ယူနစ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား၏။ ထိုဆဲလ်များ၏ နံရံများကို အဆီများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
➡️မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင် A, D, E, K များကို အူးလမ်းကြောင်းထဲမှ သွေးထဲသို့ စုပ်ယူရန် အဆီဓာတ်လိုအပ်၏။
➡️ကိုယ်ခန္ဓာထဲ၌ အရေးပါသော ဟော်မုန်းများ ထုတ်လုပ်ဖို့ အဆီဓာတ် လိုအပ်သည်။
➡️ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားဖို့ လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို အဆီဓာတ်က လည်း ပေးသည်။ အထူးသဖြင့် ၂-နှစ်အောက်ကလေးများက ကြီးထွားနှုန်း အမြန်ဆုံး အချိန်ဖြစ်၍ အဆီဓာတ်က ချို့တဲ့လို့မရ။
📗အဆီဓာတ် ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလည်း။ အဆီဓာတ်အမျိုးအစား အားလုံးက ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်ပါသလား?
❇️၁။ ပြည့်ဝဆီ (saturated fat )
-ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါ။ မကောင်းသောအဆီဟုမှတ်ပါ။ ဥပမာ- အမဲဆီ ဝက်ဆီများ। စားအုန်းဆီ। ထောပတ်। cream। vegetable oil ဆိုပြီးရေးထားသော မည်သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှ ထုတ်ထားမှန်းမသိသည့် အဆီများ। ထိုအဆီများကိုအခြေခံပြီး ထုတ်ထားသော margarines များ။
-ရှောင်ပါ။ လျော့ပါ။ အသားဟင်းချက်ရာ၌ အဆီဖတ်တွေထုတ်ပြီးချက်ပါ။ မနှမြောပါနဲ့။ ကလေးများကြိုက်သည့် အစားအစာများတွင် saturated fat များ အရမ်းပါတတ်သည်။ ဥပမာ- ဘီစကစ်। ချောကလက်।ဒိုးနပ်। ဟမ်ဘာဂါ( တခါတလေပဲ ကျွေးပါ) စသဖြင့်။
❇️၂။ မိုနို-မပြည့်ဝဆီ ( monounsaturated fat)
-ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်း၏။ ဥပမာ-ပဲဆီ।canola oil। သံလွင်ဆီ। canola သို့ olive oil ကိုအခြေခံထားသော margarines spread များ
-စားပါ။ ဟင်းချက်ရာ၌ သုံးပါ။
❇️၃။ ပိုလီ-မပြည့်ဝဆီ ( polyunsaturated fat)
ပိုလီ-မပြည့်ဝဆီကို အိုမီဂါ-၃ နှင့် အိုမီဂါ-၆ ( omega-3 and omega-6 )ဟု ထပ်ခွဲသည်။
-ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသည်။ ဥပမာ- နေကြာဆီ।ပြောင်းဖူးဆီ। soy bean oil। cottonseed oil। ထိုအဆီများကို အခြေခံထားသော margarines များ စသဖြင့်။
❇️၄။ ပုံပြောင်းဆီ ( trans fat )
အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ အဆီ ၃-ခုသည် မီးပြင်းပြင်းကို အကြာကြီး သော်လည်းကောင်း। ခဏခဏသော်လည်းကောင်း ထိတွေ့လျှင် ပုံပြောင်းဆီ (trans fat) ဆိုပြီး မကောင်းသော အဆီတချို့ ထွက်လာတတ်သည်။ ပြည့်ဝဆီကဲ့သို့ သူလည်းကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ပွဲဈေးတန်းက ပုစွန်ကြော် စားလို့ကောင်းပါသည်။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်က အီကြာကွေးလည်း အရသာရှိပါသည်။သို့သော် တနေကုန် ဒီဆီနဲ့ပဲ ကြော်နေ। နောက်နေ့လည်း ကြော်ပြီးသားဆီကို ပြန်ကြော်ဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်းစားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ မကောင်းတော့ပါ။ ဆီအရမ်းချွေတာတဲ့မေမေတွေ। ဒါလေးတော့သတိထားပေါ့။
အဆီတို့သည်စွမ်းအင်ဖြစ်၍ ဘယ်အဆီပဲစားစား ပိုလျှင်တော့ ဝိတ်တက်ပြီး ဗိုက်ရွှဲမှာပေါ့။ ဆရာဝန်တွေက အဆီတွေ အရမ်းမစားနဲ့။ လျော့စားလို့ပဲပြောတာပါ။ မစားနဲ့လို့ မပြောပါဘူး။
📙နွားနို့က ဘာလဲ। ဘယ်လဲ?
နွားနို့သည် အာဟာရအရမ်းရှိသော စားသောက်ကုန်ဖြစ်သည်။ အဆီဓာတ်လည်းပါ၏။ အသားဓာတ်လည်းပါ၏။ ကဆီဓာတ်လည်းပါသည်။ ကယ်လစီယမ်လည်း ကြွယ်ဝ၏။ သို့သော် သူ့မှာပါတဲ့ အဆီဓာတ်က အထက်မှာ ဖော်ပြထားသော ၁।၂।၃ အဆီအားလုံးပါ၏။ နံပါတ်(၁)က အများဆုံးပါ၏။အဲဒီတော့ ၁ ပါတာကို မကြိုက်၍ ပြုပြင်ကြသောအခါ အဆီလျော့ထားသော low fat milk နှင့် အဆီထုတ်ထားသော skim milk ဆိုပြီးပေါ်လာတော့သည်။ အဆီကိုပဲပြောင်းထားခြင်းဖြစ်၍ အခြားပါဝင်သော အာဟာရများ အပေါ်တွင် မထိခိုက်ပါ။ အဆီလျော့သွား၍ အရသာလည်းလျော့သွားသည်။ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာ တစ်ခုကိုပြောပါမည်။ ကလေးအသက် ၁-နှစ်ပြည့်၍ ဆရာဝန်က ဖော်မြူလာကို ရပ်ခိုင်းပြီး နွားနို့တိုက်ခိုင်းသောအခါ whole milk / full cream milk/မပြောင်းထားသော/အဆီမထုတ်ထားသောနွားနို့ကိုပဲ အသက် ၂-နှစ်အထိတိုက်ပေးပါ။ အသက် ၂-၅ နှစ်ကို အဆီလျော့ထားသော နို့( light milk) ကိုတိုက်နိုင်သည်။ အဆီထုတ်ထားသော နွားနို့ ( skim milk)ကို အသက် ၅နှစ်ကျော်မှတိုက်ပါ။ ရှင်းရှင်းလေး မှတ်ချင်ရင်တော့ အသက် ၅-နှစ်အထိ အဆီမထုတ်ထားသော ပုံမှန် နွားနို့ကို ပဲတိုက်ပေးပါ။ တနေ့ကို ၅၀၀ml ထက်တော့ မပိုပါစေနှင့်။
စိုးမိုးကျော်( Child Health Myanmar Page)
ကလေးများအတွက် နွားနို့ထက် ဖော်စပ်ထားသော နို့မှုန့်များက ဘာကြောင့် ပိုသင့်တော်ပါသလဲ
ကျွန်မကလေးကို ငါးကြီးဆီ( fish oil ) တိုက်ချင်လို့